होटल "पपलार" (Lazarevskoye): ठेगाना, विवरण, सेवा,
होटल "पपलार" (Lazarevskoye) यसको अतिथि समुद्र नजिक निकटता खुसी हुन सक्छ। यसको आगंतुकों समुद्र तट देखि केवल 10 मिटर हटाउन हुनेछ। Lazarevskoe सडक Calarasi मा एक होटल जटिल छ, फरक मूल्य विभाग को 16 आरामदायी कोठा GK "Topol" (Lazarevskoye) एक ठूलो क्षेत्र र तल्ला क्षेत्र छ रूपमा जो कोहीले, आराम रहन अनुमति दिन्छ। विकल्प फरक कक्षाहरू को कोठा प्रदान गर्दछ। तिनीहरूलाई अहिले र भाषण जानुहोस्।
16 वर्ष पुरानो सुत्ने ठाउँ अन्तर्गत बच्चाहरु 50 प्रतिशत छुट उपलब्ध छ।5वर्ष मुनिका बच्चाहरु मुक्त छन्।
उदाहरणका लागि, आफ्नो छुट्टी लागि सबैभन्दा बजेट विकल्प ठूलो डबल बेड, शौचालय, टिभी छ जो 2-seater एक-कोठा, छ। हिमालहरूको एक दृश्य संग आवास को लागत 1100 rubles देखि, र समुद्र को दृश्यहरु संग सुरु - 1300 rubles देखि, र आगमन समय आधारमा बढाउन सक्छ।
एउटै लागत लागि, तपाईं एक-कोठा तीन बेड जवान संस्करण विपरीत, एक फ्रिज र एक शवर हुनेछ जो, मा दिन कोठा, हटाउन सक्नुहुन्छ।
भाडामा दुई-बेडरूम सुइट्स लागि मूल्य दायरामा 1100 देखि प्रति दिन 2000 rubles गर्न। हिमालहरू वा समुद्र को एक दृश्य संग तीन वा quadruple विकल्प दिइएको छनोट।
5 सिट को लागि डिजाइन कोठा, दुई-कोठा र तीन-कोठा, र एक बालकनी को उपलब्धता आधारमा 1100 देखि 1800 आफ्नो मूल्य दायरा छन्।
होटल मा सबै भन्दा शानदार कोठा मनोरम समुद्र दृश्य संग डबल-बेडरूम र तीन-बेडरूम सुइट्स छन्। लक्जरी अपार्टमेन्ट को मूल्य प्रति दिन अप गर्न 2500 rubles हुन सक्छ। को भित्री कोठा मा झर्ने एकै नजरमा सुरु गर्नुहोस्। सबै कोठा एक महंगा मरम्मत उच्च गुणवत्ता सामाग्री संग गरिएको थियो छ। सुन्दर समाप्त राम्रो गुणस्तरीय फर्नीचर ठोस काठ बनेको द्वारा complemented छ।
को भित्री चित्रहरु र ताजा फूल सजिएको छ। एक मनोरञ्जन कोठा रूपमा वाइडस्क्रिन टिभी छ। समुद्र द्वारा आराम गर्न चाहनेहरूको यस होटल मा रहन सक्छ भनेर होटल जटिल "Topol" (Lazarevskoye), दुई भवन छ।
सेवाहरू संख्या सोची को क्षेत्रमा एक आरामदायक रहन को लागि पर्याप्त छ। निःशुल्क सुअवसरको लागि समावेश: छोराछोरीको कोठा, वायरलेस इन्टरनेट, Housekeeping र थप प्रयोग। एक थप शुल्क लागि, आगन्तुक यस्तो शटल सेवा रूपमा थप सुविधाहरू, एक नम्बर प्राप्त छ, मा-कोठा इन्टरनेट, साथै ट्याक्सी सेवा, लाँड्री र सुक्खा सफाई।
खाना लागि को रूप मा, क्याफे र रेस्टुरेन्ट होटल अतिथि लिन र 15-tiprotsentnuyu प्रस्ताव आगंतुकों प्रदान गर्न तयार छन्। व्यञ्जन प्रशस्त पनि सबैभन्दा परिष्कृत उम्दा खुसी हुनेछ। तपाईं पहिले महाराज को नयाँ पाक कला प्रयास गर्न मौका छ।
यस क्याफे "Topol" तपाईं, ताजा गरे पेस्ट्री, साथै मादक र शीतल पेय को एक दायरा ग्रिल मा तातो र चिसो नाश्ता, स्वादिष्ट सलाद र भोजन प्रदान गर्न इच्छुक छन्। विशेष गरी साँझ सुविधा, जब प्रदर्शन कलाकारहरूको र प्रत्यक्ष संगीत मा राम्रो। तपाईं Lazarevskoye एक बन्दोबस्त र विचरण shimmer रोशनी रात हल्का, पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ।
को Calarasi घण्टे मा गेस्ट हाउस र महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, अशक्त र नवविवाहितहरूका को सहभागीहरू व्यक्तिगत प्रस्ताव गर्न तयार छ। आरक्षण प्रणाली धेरै सरल छ। तपाईं बस शरीर र नम्बर र सम्पर्क टेलिफोन प्रकार चयन गर्न आवश्यक छ।
प्रशासन कुनै पनि भुक्तानी बिना आग्रह सबै प्रश्न र पुस्तक प्रतिक्रिया हुनेछ। वा तपाईंले एउटा अनुप्रयोग अनलाइन भर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले थप विवरण लागि सम्पर्क गरिनेछ। सम्झैताको लागि राहदानी र जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक छ।
"पपलार" (Lazarevskoye): समीक्षा
हलिडे को राय सङ्केत गर्दै। होटल "पपलार" (Lazarevskoye) पर्यटकहरु सोची मा एक सस्ती छुट्टी व्यवस्था गर्न चाहने बीच धेरै लोकप्रिय छ। समीक्षा आगंतुकों सेवाहरू अनुवाद र फेरि यो ठाउँमा आउन तयार गुणस्तर सन्तुष्ट छन् भन्छन्। सबै को पहिलो, पाहुनाहरूको टिभी संग विशाल र आरामदायक कोठा उल्लेख र कि तातो मौसम मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, वातानुकूलन को उपस्थिति। को बालकनी जो, यात्री अनुसार, धेरै सफा छ समुद्र, बाहिर एउटा सुन्दर दृश्य छ।
शक्ति पनि ठीक छ। आफ्नो तिर्खा र भोक निभाउन एउटा क्याफे मा विविध र किफायती मेनु। साथै, मानिसहरू छुट्टी अतिथि रूपमा सहज र स्वतन्त्रित बनाउन चाहन्छ जसले मैत्री र राम्रो-natured कर्मचारी, उल्लेख गर्नुभएको छ।
विशेष ध्यान Lazarevskoye embankment को गाउँमा भुक्तान गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईं एक सुखद समुद्र समीर सास, एक पैदल संगठित गर्न सक्नुहुन्छ। बाटो, मानिसहरू गुणस्तर कुराहरू किन्न चाहने, त्यहाँ घुमफिर गर्न ठाउँ छ: उत्पादन, वस्त्र र स्मृति चिन्ह को एक किसिम बेचन कि धेरै पसलहरूमा, यसको ढोका खोल्न खुसी हुनुहुन्छ। साँझ मा विचरण मा विशेष गरी राम्रो, किनभने यो समयमा, सबै रोशनी मा सरेका र सडक तल एक पैदल एक सुखद साँझ विचरण मा उत्तेजित गर्दछ।
होटल "Topol": स्थान
होटल "पपलार" (Lazarevskoye) एक सुविधाजनक स्थान छ। नजिकैको एक सुन्दर कंकड समुद्र तट छ। होटल देखि 300 मीटर मा - शहर को केन्द्र, बजार जहाँ तपाईं धेरै उत्पादन धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु मा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। आधा किलोमिटर पानी पार्क "Nautilus", 2,000 मानिसहरू सम्म सीट गर्न सक्ने एक विशाल मनोरञ्जन जटिल छ जो प्राप्त गर्न हटाउन हुनेछ। पानी पार्क छ स्लाइडहरू छ किनभने उच्च पहाडमा देखि सबै भन्दा उत्सुक सवारी, सन्तुष्ट गरिनेछ। निःशुल्क3वर्ष पुरानो सवारी अन्तर्गत बच्चाहरु, उमेर 12 वर्ष मुनिका बच्चाहरु लागि प्रविष्टि को लागत 900 rubles छ, र वयस्क भ्रमण को लागि 1100 rubles खर्च हुनेछ। Waterpark "Nautilus" जुन खुला महिनाको आधारमा देखि 10 AM6वा7बजे गर्न सेप्टेम्बर छ।
समुद्र तट देखि 50-timetrovoy दूरी संग जडान धेरै लोकप्रिय गाउँ Lazarevskoe छ। "पपलार 2" मुख्य होटल जटिल देखि दोस्रो शरीर प्रतिनिधित्व गर्दछ। संख्या दायरा पहिलो आवास देखि आवास को नै मूल्य फरक छ हुनुहुन्छ। प्रार्य गठन र युरोपेली भोजन मा विशेषज्ञता, एक स्वादिष्ट भोजन क्याफे र भोजन कक्ष चाहनेहरूलाई लागि। यो उत्पादन, समुद्री भोजन, स्थायी मनोरञ्जन कार्यक्रम सहित एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
मा होटल जटिल देखि2किमी होटल आफ्नो बाटो सरल हुनेछ कि स्टेशन हो। पनि छुट्टी समयमा शीर्ष स्थिति मा आफ्नो शरीर कायम गर्न स्थानीय जिम भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ चाहनेहरूलाई लागि, 300 मिटर टाढा स्थित। होटल "Topol" र Lazarevskoye - मनोरंजक लागि ठूलो ठाउँ। त्यहाँ आकर्षण धेरै छन्। होटल देखि पैदल दूरी मा सबै भन्दा कम मूल्यहरु मा नवीनतम चलचित्र समाचार हेर्न मौका प्रदान जो एक सिनेमा छ। एक एटीएम देखि पैसा सञ्चालन प्रदर्शन होटल जटिल वरिपरि हुन सक्छ। त्यहाँ एउटा ठूलो सुरक्षित पार्किंग साइट मा उपलब्ध छ।
आराम गर्न ठूलो स्थान
एक सस्ती र सहज रहन को लागि एक ठूलो विकल्प होटल "Topol" छ। Lazarevskoye - सबै आवश्यक पूर्वाधार एक रमणीय होटल को लागि एक सिद्ध ठाउँ। आफ्नो रहन सकेसम्म सहज बनाउन होटल मैत्री र इच्छुक कर्मचारी। क्याफे र भोजन कक्ष मा स्वादिष्ट भोजन बिदा को खुसी सम्झनाहरु तपाईंलाई छोड्नुहोस्। Lazarevskoye embankment को गाउँमा समुद्र हावा svezhom मा टहलने लागि ठूलो ठाउँ हुनेछ।
एक इच्छित संख्या बुक फोन भन्दा वा होटल जटिल "Topol" को आधिकारिक वेबसाइटमा हुन सक्छ। व्यवस्थापक रूपमा चाँडै सकेसम्म तपाईं जवाफ हुनेछ र आफ्नो हतियार को विवरण निर्दिष्ट गर्न। यो कल गर्न कुनै समय संग होटल कर्मचारी द्वारा थप विचार को लागि आफ्नो आवेदन को साइट छोड्न सम्भव छ। होटल "पपलार" सधैं पाहुनाहरूलाई खुसी छ र तयार नयाँ गर्मी मौसम मा सबै अतिथिहरूको स्वागत छ।
Dolgoprudny मा सस्ता होटल
Caravel2* (साइप्रस / Limassol) - फोटो, मूल्य र पर्यटक रूस देखि समीक्षा
Karon भीर Bungalows3* (थाईल्याण्ड, फुकेत): होटल, सेवा, को विवरण
शाही Azur Resort5* (मिश्र, Makadi खाडी): होटल को वर्णन, यात्री समीक्षा
क्लब होटल पाम Azur (टुनिशिया, जर्बा): फोटो र समीक्षा
अतिथि होटल नाइस कोटे Azur र स्वागत
जब उनि मरम्मत पछि KUBAN Varenikovskaya भन्दा पुल खोल्न?
उपयोगी उत्पादन: क्यालोरी पिस्ता
नाटक थियेटर (तुला): इतिहास, रिटोरोयर
ग्रेगर Strasser, को NSDAP को नेता: जीवनी। हिटलर विरुद्ध ग्रेगर Strasser। "लामो चक्कु को रात"
SU-100 (विमान): विनिर्देशों र फोटो
किन एक दिन कम्तिमा 10,000 कदम गर्न छ?
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा पत्थर द्वीप महल: ठेगाना, फोटो
आपराधिक कार्यवाही संस्थान निर्णय: कानुनी पक्ष
"VKontakte" को एक समूह untwist कसरी सल्लाह
आधुनिक जीवित को भित्री मा पर्खाल अलमारियों
पूल "डायनेमो" (भोलोग्डा) पुनर्निर्माण पछि